Fokonolona teny amin'ny manodidina ihany no nahita ireo taolan-dava ireto ka nampandre avy hatrany ny zandarimaria ao Antanandava. Nidina teny ifotony avy hatrany ireto farany niaraka tamin'ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny. Fantatra tamin’izany fa mety ho taolam-paty avy lavitra ireto nisy naka ireto. Tsy mbola nahitana trangana vaky fasana mantsy tao amin’ity Fokontany ity sy ny manodidina tato ho ato. Noraisin’ireo tompon’andraikitra any an-toerana an-tanana moa ny fandevenana ny taolana raha efa misokatra kosa ny fanadihadiana mikasika izany.